NISEHO NY FAHAMORAM-PO – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 novembre 30, 2018 novembre 30, 2018 Laisser un commentaire sur NISEHO NY FAHAMORAM-PO
« Dia tsy avy amin’ny asa amin’ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindrampo kosa no namonjeny antsika, tamin’ny fanasan’ny fiterahana indray sy ny fanavaozan’ny Fanahy Masina. » (Titosy 3:5)
– Tonga Jesosy Kristy Ilay nanaisotra ny fahotan’izao tontolo izao. Izany no fisehoan’ny fahamoram-pon’Andriamanitra.Fa ny fahamoram-pon’Andriamanitra tamiko sy taminao ve
efa niseho tokoa? Efa niseho izany tamin’ny Batisa izay nanesorana ny fahotana tamin’ny fanasan’ny fiterahana indray. Efa nateraka araka ny nofo isika ary izany no nandovantsika ota izay mitondra fahafatesana tokoa. Ity fanasan’ny fiterahana ity no fiterahana vaovao manome fiainana mandrakizay, fa ilay fiterahana teo aloha dia araka ny nofo ihany, tsy mahazo miditra amin’ny fanjakan’Andriamanitra.
– Fahamoram-pon’Andriamanitra koa ny fanavaozan’ny Fanahy. Raisina amin’ny Batisa koa ny Fanahy rehefa nodiovina isika. Ny Fanahy no mahatonga antsika ho zanak’Andriamanitra, izany no manaraka antsika eo amin’ny fiainantsika. «Fa izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra.» (Romana 8:14). Ny zanaka dia mpandova sy mpiray lova amin’i Kristy. Raha tao anatin’ny nofo isika dia nandova ota, fa izay ao amin’ny Fanahy kosa dia tsy ota intsony no lova fa ny lovan’i Kristy. Aza mamono ny Fanahy. «Fa raha ny Fanahy no amonoanareo ny asan’ny tena dia ho velona hianareo» (Romana 8:13b). Mazotoa mihevitra ny zavatry ny Fanahy. Fahamoram-Panahin’Andriamanitra izany. Jesosy hampahery antsika.
Publié parfilazantsaramada novembre 30, 2018 novembre 30, 2018 Publié dansUncategorized